« myrtille », “hibiscus”… Azo anoloana tsara ireny akora simika amidy eny amin’ny mpivarotra ireny ny akora natoraly, sady manana tombony, noho izy ireo tsy ahiana loatra hitarika olana ara-pahasalamana…
Ankoatra ny maha-natoraly azy, izay tsy ahitana akora simika mihitsy, dia miasa toy ireny fonosana miaro ny volo ireny ny fandokoana azy amin’ny zava-maniry. Ny faritra ivelan’ny volo fotsiny ihany no mantsy ipetahan’ny loko. Mampiravona ny lokom-bolo ho natoraly ihany kao izy ireny. Tsy atahorana hampisy tohina ihany koa anefa ary maharitra ny lokom-bolo.
Ny olana kely amin’ny fampiasana ny lokom-bolo amin’ny zava-maniry dia izy tsy ahafahana mahazo ny lokom-bolo tadiavina rehetra. Tsy afaka manova ny lokom-bolo ho mazava (blonde, marron sns) tanteraka mantsy izy ireny no sady tsy afaka mandrakotra tanteraka ny volofotsy ihany koa. Ankoatra izay, mila maharitra amin’ny fotoana hilonan’ny volo, mba tena handraisany tsara ny loko. Farany, miala tsikelikely ny lokom-bolo, rehefa sasana ny volo.
· Betiravy : Potsehina ao anaty « mixer » ny betiravy ary afangaro amin’ny menaka voanio. Ahosotra amin’ny volo ary fonosina “film alimentaire”. Avela hilona mandritra ny adin’ny iray eo ho eo. Dila izay fotoana izay dia kobanina sy tsifirina vinaigitra paoma ny volo.
· Kafe : Afangaro ao anaty lovia jobo ny menaka voanio sy ny kafe voatoto. Raha efa izay dia arotsaka indray ny vovoka kafe efa nampiasaina. Averina afangaro ary ahosotra amin’ny volo. Fonosina amin’ny “film alimentaire” ny volo, avela hipetraka adin’ny iray fara-fahakeliny vao kobanina.
· Henné : Rehefa maina tanteraka ny ravin’ity hazo ity dia totoina ho lasa vovoka. Afangaro amin’ny rano mafana mba ho lasa feta mitambatra tsara. Ahosotra amin’ny volo.
Tsara ny manamarika fa mba hipetrahan’ny loko tsara dia tokony averina matetika ity torohevitra ity.